Ubuxoki Obabangela Ukuba Abantu Bathi UThixo Ukhohlakele​—Ukohlwaywa Esihogweni, Ukutsha Ngonaphakade
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ubuxoki Obabangela Ukuba Abantu Bathi UThixo Ukhohlakele
“Imiphefumlo yaboni iya esihogweni bakufa, apho igwetyelwa ‘ukutsha ngonaphakade.’ ” (ICatechism of the Catholic Church) Ezinye iinkokeli zonqulo zithi abo basesihogweni bohlukaniswe ngokupheleleyo noThixo.
“Umphefumlo owonayo—kuya kufa wona.” (Hezekile 18:4) Abafileyo “abazi nto konke konke.” (INtshumayeli 9:5) Ukuba umphefumlo uyafa yaye awazi nto konke konke, kwenzeka njani ukuba ‘utshe ngonaphakade’ okanye ube sentlungwini yokwahlukaniswa noThixo?
EBhayibhileni, amagama esiHebhere nesiGrike aguqulelwe ngokuthi “isihogo,” abhekisela kwingcwaba eliqhelekileyo. Ngokomzekelo, xa uYobhi wayegula kakhulu, wathandaza wathi: “Akwaba ubunokundifihla engcwabeni [“esihogweni,” ngokweDouay-Rheims Version].” (Yobhi 14:13, iHoly ­Bible—Easy-to-Read Version) UYobhi wayefuna ukuphumla, kungekhona kwindawo yokuthuthunjiswa okanye apho ahlukaniswe khona noThixo, kunoko engcwabeni.
Ukukhohlakala akusenzi sifune ukumthanda uThixo; kunoko kuyasibhebhetha kuye. URocío ohlala eMexico uthi: “Ndafundiswa ngesihogo ndiselusana. Ndandingcangcazela luloyiko kangangokuba ndandingacingi ukuba uThixo anganeempawu ezintle. Ndandicinga ukuba unomsindo yaye akaxoleli.”
Oko kuthethwa yiBhayibhile ngemigwebo kaThixo nemeko yabafi yamenza uRocío wayitshintsha indlela amjonga ngayo uThixo. Uthi: “Ndaziva ndikhululekile—kwaba ngathi kususwe umthwalo onzima ebendinawo. Ndaqiniseka ukuba uThixo ufuna sonwabe, uyasithanda, nam ndinokumthanda. Ufana notata obabamba ngesandla abantwana bakhe nofuna bonwabe.”—Isaya 41:13.
Abantu abaninzi baye bazimisela ukukhonza kuba nje besoyika isihogo, kodwa uThixo akafuni umkhonze kuba umoyika. Kunoko, uYesu wathi: “Uze umthande uYehova uThixo wakho.” (Marko 12:29, 30) Ngaphezu koko, ukuba siyaqonda ukuba uThixo usebenzisa okusesikweni, sinokumthemba ukuba uya kugweba ngokusesikweni nakwixesha elizayo. Njengomhlobo kaYobhi uElihu, ngelunda sinokuthi: “Makube lee kuThixo oyinyaniso ukwenza ngobungendawo, nakuSomandla ukwenza ngokungekho sikweni.”—Yobhi 34:10.